एक सम्झौता सम्झौता तयार गर्नुहुन्छ? हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछौं
कर्पोरेट कानून » समझौता सम्झौता
एक सम्झौता सम्झौता एक विशेष प्रकारको सम्झौता हो। एक सम्झौता सम्झौतामा, पार्टीहरूले विवाद वा अर्को अनिश्चित अवस्थाको समाधानको बारेमा सम्झौता गर्ने लक्ष्य राख्छन्। यो पनि एक सम्झौता हो कि एक रोजगारदाता र एक कर्मचारी स्वेच्छाले उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, आपसी सम्झौता द्वारा, रोजगार सम्झौता समाप्त।
एक करार सम्झौता ड्र?
भविष्यका समस्याहरू बचाउनुहोस्
एक सम्झौता सम्झौता एक विशेष प्रकारको सम्झौता हो। एक सम्झौता सम्झौतामा, पार्टीहरूले विवाद वा अर्को अनिश्चित अवस्थाको समाधानको बारेमा सम्झौता गर्ने लक्ष्य राख्छन्। यो पनि एक सम्झौता हो कि एक रोजगारदाता र एक कर्मचारी स्वेच्छाले उपयोग गर्न सक्छन्, आपसी सम्झौता द्वारा, रोजगार सम्झौता समाप्त। एक सम्झौता सम्झौता सबै प्रकारका विवादहरूको लागि निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, तर प्राय: बर्खास्त मामलाहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
एक सम्झौता सम्झौता के हो?
जब एक सम्झौता सम्झौता समाप्त हुन्छ, रोजगारदाताले डच कर्मचारी बीमा एजेन्सी (UWV) वा उप-डिस्ट्रिक्ट अदालतबाट कर्मचारी बर्खास्तको लागि अनुमति लिनु पर्दैन। यो एक महत्त्वपूर्ण कारण यो छ कि रोजगारदाताहरू र कर्मचारीहरूले केहि मामिलाहरूमा सम्झौता सम्झौताको माध्यमबाट आपसी सम्झौताको आधारमा रोजगार सम्झौता समाप्त गर्न चाहन्छन्। एक सम्झौताको सम्झौताको छनौटको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण यो छ कि रोजगार सम्झौताको अन्त्य छिटो र सजीलो गर्न सकिन्छ। यसले कानुनी लागतमा ठिक फरक पार्छ र दुबै पक्षका लागि लाभदायक छ। यद्यपि यो दुबै पक्षहरूको लागि एक वकीलको समर्थनमा सम्झौतामा पुग्न अझ बढी सुविधाजनक छ। के तपाईं भविष्यमा कानुनी समस्याहरूलाई रोक्ने समझौता सम्झौता बनाउन चाहानुहुन्छ? कृपया सम्पर्क गर्नुहोस Law & More.
सम्झौता सम्झौताको सामग्री
एक सम्झौता सम्झौतामा, रोजगार सम्झौता समाप्त हुने सर्तहरू राखिन्छ। एक सम्झौता सम्झौताको सही सामग्री विशिष्ट स्थिति र परिस्थितिहरूमा निर्भर गर्दछ। यद्यपि त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन सँधै निर्धारित गरिन्छ। सर्वप्रथम, समाप्ति मिति सम्झौताको सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मध्ये एक हो। दोस्रो, सूचना अवधि अनुपालन गर्न अनिवार्य छ। अन्तमा, सम्झौताहरू मिति समाप्त नभएसम्म बाँकी रहेको कार्य अवधिको सम्बन्धमा हुनुपर्दछ। यो सम्भव छ कि कामबाट छुट पाउने अवधिमा सहमति भयो। त्यो अवस्थामा, कर्मचारीले अब काम गर्नुपर्दैन, तर उसको तलबको अधिकार बाँकी छ।
बाँकी रहेको छुट्टी ब्यालेन्स र कुनै पनि अन्य व्यक्तिगत बस्तीहरू, जस्तै आयोग, बोनस योजनाहरू वा साझा योजनाहरूको बारेमा पनि सम्झौताहरू गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, रोजगारदाता र कर्मचारी बीच पारस्परिक परामर्शमा तय पारिएको संक्रमण भत्ताको रकम सम्झौता सम्झौतामा राखिनेछ। संक्रमण भत्ता को राशि अक्सर वार्ता को विषय हो र निश्चित रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण यस विषयमा कानुनी सहायता लिनु बुद्धिमानी हुनेछ। हाम्रो टोली तपाईंलाई मद्दत गर्न खुशी हुनेछ।
एक सम्झौता सम्झौताको सन्दर्भमा सर्तहरू
कर्मचारीसँग वैधानिक अधिकार छ दुई हप्ता भित्रमा हस्ताक्षर गरीएको सम्झौता रद्द गर्नु। रोजगारदाताले सम्झौतामा कर्मचारीको फिर्ता को अधिकार समावेश गर्नु पर्छ। थप रूपमा, जब एक सम्झौता सम्झौता समाप्त हुन्छ, पार्टीहरू बीच अन्तिम डिस्चार्ज प्रदान गरिन्छ। यसको मतलब रोजगारदाता र कर्मचारीले एक अर्काबाट सेटलमेन्ट सम्झौतामा राखिएको भन्दा बाहेक अरु केही दावी गर्न सक्दैनन्। अन्तिम डिस्चार्ज प्रावधान प्राय: सम्झौताको अन्तमा समावेश हुन्छ।
बेरोजगारी लाभको अधिकार
एक सम्झौता सम्झौता जहिले पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ कि रोजगारदाताले रोजगारी समाप्त गर्न पहल गरेको छ। कर्मचारी त पक्कै बेरोजगार हुनेछैन। यो बेरोजगारी लाभ प्राप्त गर्न को हकदार कर्मचारी को क्रम मा महत्वपूर्ण छ। तलका सर्तहरू पनि पूर्ण गर्नुपर्दछ यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि कर्मचारी बेरोजगार लाभ प्राप्त गर्न योग्य छन्:
• रोजगारदाताले कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सहमत हुन अनुरोध गरेका छन्;
Settlement सम्झौता सम्झौता सूचना अवधिको लेखा लिन्छ;
• कर्मचारीले प्रमाणित गर्न सक्छ कि उसले खोज गरेको छ वा नयाँ काम खोज्दैछ।
सल्लाह - कुराकानी - सम्झौता सम्झौता को चित्रण
हाम्रो टोली तपाईंलाई सल्लाह दिन, तपाईंको लागि वार्तालाप गर्न र तपाईंको लागि सम्पूर्ण सम्झौता सम्झौता बनाउनमा खुशी हुनेछ। हामी सम्झौताको सम्झौताको व्यावहारिकतामा सल्लाह दिन्छौं र स्पष्टता प्रदान गर्दछौं। हामी तपाइँको विशेष इच्छाहरूलाई हेर्छौं र सुनिश्चित गर्दछौं कि तपाइँ राम्रो मानीएको र राम्रो निर्णयमा पुग्नुभयो। कुराकानी गर्दा, हामी तपाईंलाई राम्रो पूर्वसनहरूको साथ इष्टतम वित्तीय परिणाम प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछौं